"အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်" - Yangon Nation News
ယခုအခါ (၂၀၂၀) နိုဝင်ဘာလ(၈) ရက်နေ့၌ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးလည်းအောင်မြင်စွာ ပြီးသွားပါပြီ၊
၎င်းရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီကာလတွင် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ၊နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ မဲဆန္ဒရှင် မိဘ ပြည်သူများထံသို့ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဆောင်ရွက်နေသော ရခိုင်ပြည်နယ်၊တောင်ကုတ်မြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၃) ဦးအား (AA) လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှ ဥပဒေမဲ့၊အကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါသည်၊
သို့ပါသောအခြေအနေကြောင့် ဖမ်းဆီးခံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးနိုင်ခွင့်များ ဆုံးရှုံးနစ်နာခဲ့ကြရပါတယ်၊
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာလုံခြုံမူနှင့် ဥပဒေဆိုင်ရာကာကွယ်မူလည်းဆုံးရှုံး ခဲ့ကြရပါတယ်၊
မဲဆန္ဒရှင်များ၊ရွေးကောက်ပွဲဝင်စည်းရုံးလှူံ့ဆော်သူများ၊နိုင်ငံရေးပါတီမှပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သူများသည် အကြမ်းဖက်ခြင်း၊အနိုင်အထက်ခြိမ်းခြောက်ခံရခြင်း၊စသည်တို့ကင်းဝေးပါမှ လွတ်လပ်စွာ၊အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝစွာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည်၊
ဆိုလိုသည်မှာ တရားမဲ့ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်း၊ ခြိမ်းချောက်အကြပ်ကိုင်ခြင်း၊လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏တာဝန်မဲ့လုပ်ရပ်များ၊တရားမဲ့လူမသိ၊သူမသိသတ်ဖြတ်ညှင်းဆဲမူများကင်းဝေးစေရန်ဖြစ်သည်၊
ဥပဒေမျက်နှာစာတွင် တန်းတူရှိမူနှင့် ဥပဒေရှေ့မှောက်တွင် ဥပဒေအရ စောင့်ရှောက်ပိုင်ခွင့်များ ဟူသည့် ကုလသမဂ္ဂ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာလုံခြုံမူနှင့် ဥပဒေဆိုင်ရာ ပြဌာန်းထားသော
ကာကွယ်မူများကို ဆုံးရှုံးခဲ့ ကြရပါတယ်၊
ယခုအခါ AA မှရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်သော မဲဆန္ဒနယ်များအား ကျင်းပပေးပါရန် အိတ်ဖွင့်ပေးစာ သဘောမျိုးထုတ်ပြန်တာကိုတွေ့ရပါတယ်၊
တပ်တော်မှလည်း ကြိုဆိုသော အိတ်ဖွင့်ကြေညာချက်တစ်ဆောင်ကို ပြန်လည်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပြီး၊
UEC မှလည်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှ တဆင့်
၎င်းနယ်မြေများတွင် လုံခြုံရေးစိတ်ချရပါက ညှိနိူင်းကြကာ ရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပပေးပါမည်ဟု ပြောကြားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်၊
ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည့်ရက်ကို AA မှကြိုတင် (hints) ပေးသလိုမျိုး မရေးသင့်ပါဟု ရေးသားတင်ပြပါရစေ၊
ထိုသို့(hints) ပေးမူသည် ကြိုတင်အကြပ်ကိုင်လိုက်သည့်သဘောဟု ယူဆရပါတယ်၊
UEC သည် နယ်မြေလုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူများနှင့် ဆွေးနွေး ညှိနိူင်း၍ နယ်မြေလုံခြုံရေးကို အာမခံပေးနိုင်လျှင် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးမည့်သဘောထားကို တွေ့ရပါတယ်၊
သို့ဖြစ်ပါသော အကြောင်းကြောင်းများကို ဆင်ချင် သုံးသပ်ကြကာ AA မှ ဖမ်းဆီးခေါ်ယူသွားသည့် တောင်ကုတ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း(၃) ဦးအား အမြန်ဆုံးပြန်လည် လွှတ်ပေးပါရန် မြန်မာနိုင်ငံသားများမှ တောင်းဆိုဘို့လိုပါတယ်၊
တောင်ကုတ်မြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်မှ ဝင်ရောက်အရွေးချယ်ခံကြမည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း သုံးဦးအား အမြန်ဆုံးပြန်လည် လွှတ်ပေးခြင်းသည် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပစေရန် ယုံကြည်မူအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်၊
တရားလက်လွတ် ဖမ်းဆီးခံ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် သုံးဦးအား ချက်ချင်းလွတ်ပေးရေးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ၏
အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက် အားပြုလျက်ရှိနေပေသည်။
တစ်ဆက်တည်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏ သမ္မတများနှင့်သက်ဆိုင်သော ဥပဒေပြဌာန်းချက်များကိုရေးသားတင်ပြပါစေ၊
ဤဥပဒေပါ ဖွင့်ဆိုချက်များကို ရေးသားဖော်ပြမူသည် မည်သူ၊မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကိုမျှ ရည်ညွှန်းခြင်းမရှိပါဆိုသည်ကိုလည်း အားလုံးကို အသိပေးပါရစေ၊
ပုဒ္မ(၇၁) – ပုဒ်မ
(က) နိုင်ငံတော်သမ္မတကိုဖြစ်စေ၊ဒုတိယသမ္မတတစ်ဦးဦးကိုဖြစ်စေ အောက်ပါအကြောင်းတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့်စွပ်စွဲပြစ်တင်နိုင်သည်၊
ပုဒ်မခွဲငယ်(၁ မှ ၅) အထိရှိပါတယ်၊
ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်ပြဌာန်းထားသောနိုင်ငံတော်သမ္မတ သို့မဟုတ် ဒုတိယသမ္မတ၏ အရည်အချင်းပျက်ယွင်းခြင်း၊
တို့ဖြစ်ပါတယ်၊၎င်းဥပဒေများကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်မူက များပြားလှပါတယ်၊
(ခ) နိုင်ငံတော်သမ္မတ သို့မဟုတ် ဒုတိယသမ္မတတစ်ဦးဦးကို စွပ်စွဲပြစ်တင်လိုပါက
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင်ပါဝင်သော လွှတ်တော်နှစ်ရပ်မှ လွှတ်တော်တစ်ရပ်ရပ်၏
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်းဦးရေအနက် အနည်းဆုံး လေးပုံတစ်ပုံက လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး မိမိတို့၏စွပ်စွဲချက်ကို သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်အကြီးအမှူးထံတင်ပြရမည်၊
(ဂ) ယင်းစွပ်စွဲချက်ကို သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်းဦးရေအနက် အနည်းဆုံး သုံးပုံ နှစ်ပုံက ထောက်ခံမှသာ ဆက်လက်အရေးယူဆောင်ရွက်ရမည်၊
(ဃ) လွှတ်တော်တော်တစ်ရပ်ရပ်က စွပ်စွဲချက်ကို အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ထောက်ခံလျှင် အခြားလွှတ်တော်တစ်ရပ်က ယင်းစွပ်စွဲချက်ကို အဖွဲ့ဖွဲ့၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးရမည်၊
(င) စွပ်စွဲချက်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်အခါ နိုင်ငံတော်သမ္မတ သို့မဟုတ် ဒုတိယသမ္မတ ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်းချေပခွင့်ပေးရမည်၊
(စ) စွပ်စွဲချက်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးသည့်အခါ စွပ်စွဲချက်ကိုစစ်ဆေးသော သို့မဟုတ် စုံစမ်းစစ်ဆေးစေသောလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်းဦးရေအနက် အနည်းဆုံး သုံးပုံနှစ်ပုံက ထိုစွပ်စွဲချက်သည် မှန်ကန်ပြီး စွပ်စွဲခံရသောပြစ်မူသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတ သို့မဟုတ် ဒုတိယသမ္မတရာထူးတွင် ဆက်လက်ထမ်းရွက်စေရန် မသင့်ကြောင်းဆုံးဖြတ်လျှင် စွပ်စွဲခံရသော သမ္မတ သို့မဟုတ် ဒုတိယသမ္မတအား ရာထူးမှရပ်စဲရန် ယင်းလွှတ်တော်က
(ဆ) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အကြီးအမှူးသည် တင်ပြချက်ရရှိလျှင် ရရှိချင်း စွပ်စွဲခံရသော နိုင်ငံတော်သမ္မတ သို့မဟုတ် ဒုတိယသမ္မတအား ရာထူးမှရပ်စဲကြောင်းကြေညာရမည်။
ရွေးချယ်ခံ အမျိုးသားလွှတ်တော်အစုအဖွဲ့က ရွေးချယ်တာန်ပေးခြင်းခံထားရသော၊
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံး၏ ထောက်ခံမဲအနည်းအများအလိုက် သမ္မတ၊ဒုတိယသမ္မတ(၁)၊ ဒုတိယသမ္မတ(၂) ၊အားလုံးတို့၏ ရာထူးတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်မူသည် လွှတ်တော် တစ်ရပ်ရပ်ချင်းအပေါ်မှာသာ မှီတည်နေပါတယ်၊
တပ်မတော်အစုအဖွဲ့မှအမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသူ သမ္မတဖြစ်သွားသူ သို့မဟုတ် ဒုတိယသမ္မတ၏ ရာထူးတာဝန်သည် တပ်မတော်အစုအဖွဲ့တစ်ခုတည်းအပ်ါတွင် တည်မှီနိုင်မူမရှိတော့ပါဘဲ လွတ်တော် တစ်ရပ်ရပ်အပေါ်တွင်သာ တည်မှီရမှာသာဖြစ်ပါတယ်၊
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ စုစုပေါင်း(၆၆၄) ဦးရှိပါတယ်၊
ပြည်သူ့လွတ်တော်တွင် ရွေးချယ်ခံကိုယ်စားလှယ်(၃၃၀) နှင့်တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်(၁၁၀)ဖြင့် (၄၄၀) ဦးရေရှိရပါတယ်၊
ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း၏အနည်းဆုံး လေးပုံတစ်ပုံ(၁၁၀)ကစွပ်စွဲချက်ကို လက်မှတ်ထိုးပြီးလွတ်တော်ဥက္ကထံထံကိုတင်ပြရပြီး၊
သုံးပုံနှစ်ပုံသော လွတ်တော်ကိုယ်စား(၂၉၄) ယောက်အထက်က စွပ်စွဲချက်ကိုထောက်ခံလျှင် ဆက်လက်အရေးယူဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပြီး၊
စုံစမ်းစစ်ဆေးမူကို အမျိုးသားလွတ်တော်အားစုံစမ်းစစ်ဆေးစေပြီး၊ ထိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမူကိုပြုစေသော ပြည်သူ့လွတ်တော်မှ ကိုယ်စားလှယ် သုံးပုံနှစ်ပုံ (၂၉၄) ဦးက ထောက်ခံလျှင်၊
တင်ပြပြီး၊ စွပ်စွဲခံရသူ သမ္မတ သို့မဟုတ် ဒုတိယသမ္မတအား ရာထူးမှရပ်စဲကြောင်း
အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် ဖွဲ့စည်းပုံပေးထားချက်အရ –
ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ(၅၆) ဦးက လက်မှတ်ထိုးတင်ပြရပြီး၊
(၁၅၀) ကထောက်ခံလျှင် ၊
စွပ်စွဲချက်ကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ စုံးစမ်းရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စေ၍ စုံစမ်းစစ်စေးစေပြီး၊
ထိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း ပြစ်မူကို အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်းဦးရေ၏
သုံးပုံနှစ်ပုံဖြစ်သော ဦးရေ(၁၅၀) ကထောက်ခံလျှင်၊
စွပ်စွဲခံရသူ သမ္မတ သို့မဟုတ် ဒုတိယသမ္မတအား ရာထူးတာဝန်မှရပ်စဲကြောင်းကြေညာ
ဟူ၍ ဖွဲစည်းပုံက ဖွင့်ဆိုပြဌာန်းထားပါတယ်၊
ရပ်စဲခံလိုက်ရသော အစုအဖွဲ့မှ ဒုတိယသမ္မတတစ်ဦးကို ပြန်လည်ရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်၊
အကယ်၍ ရပ်စဲခံရသူသည်သမ္မတဖြစ်ခဲ့ပါက ထိုသမ္မတ၏ အစုအဖွဲ့မှ ဒုသမ္မတတစ်ဦးထပ်မံရွေးချယ်ပြီး၊
ဒုသမ္မတ သုံးဦးထဲမှ သမ္မတ၊ဒုသမ္မတ(၁)(၂) ကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင်မဲခွဲရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်(၁၅) နေရာနှင့် အမျိုးသားလွှတ်နေရာ (၇) နေရာဖြစ်ပါတယ်၊
သို့ကြောင်ဲ ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်တွင်(၆၄၂) ဦးသာရှိနေပါတယ်၊
ပြည်သူ့လွတ်တော်တွင်ရွေးချယ်ခံနှင့် တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင် (၄၂၅) ဦးရှိပြီး၊
သုံးပုံနှစ်ပုံဖြစ်သည့် (၂၈၄) ဦး၊
တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင် (၂၁၇)ဦး ရှိနေပါတယ်၊
သုံးပုံနှစ်ပုံဖြစ်သည့် (၁၄၅) ဦး၊
စသည့်လိုအပ်သော အရေအတွက်တွင် NLD ပါတီမှ ပြည့်လု နီးပါး အနိုင်ရရှိထားမူကိုတွေ့ရပါတယ်၊
NLD ၏ မဟာမိတ်ဖြစ်လာနိုင်သော တိုင်းရင်းသားပါတီများမှလည်း သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်များ၌ အနိုင်များရရှိထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်၊
ဤအခင်းအကျင်းအရ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်သေးသည့် မဲဆန္ဒနယ် (၉)
ခုတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်(၉) နေရာ နှင့်
အမျိုးသားလွတ်တော် (၇) နေရာသည်
သက်ဆိုင်ရာ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက် အလွန်ပင်အရေးပါလိုအပ်ပြီး၊
ထို့အပြင် လွှတ်တော်များအတွင်း –
တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့အတွက်လည်း အပေါင်းလက္ခဏာ ဆောင်နိုင်သလို၊
NLD အတွက်လည်း အပေါင်းလက္ခဏာများလည်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် နှင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ၊
မြို၊သက်၊ခမွီး၊ဒိုင်းနက်၊မရမာကြီး၊တမာန်၊ချင်း၊အစရှိပါသော ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းနေထိုင်ကြပါသော ရခိုင်ပြည်နယ်သားအားလုံး သည် မိမိတို့ စုပေါင်းတည်ဆောက် ထူထောင် ကြမည့် ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးအတွက်တိုင်းရင်းသားအားလုံးနှင့်အတူ
တန်းတူ ရည်တူ ကြီးကျယ် မြင့်မားသည့် အင်အားများပင် မဟုတ်ပါလား။
မိမိတို့ပြည်ထောင်စုကြီးအတွက် ညီညွတ်ပေါင်းစည်းကြကာ –
စုပေါင်း ညီညာ အောင်ကြောင်းဖြာ နိုင်ကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်း၍
အလေးထားစွာဖြင့် . ကိုသိန်းဌေး ၈၈ ပဲခူး၊
………. (13.11.2020) ……….
” ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်လုပ်ငန်းညှိနိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ “
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အာဆီယံအပေါင်းသုံးထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် အရှေ့အာရှ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်